कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ? | Lifemandu
| सोमबार, ९ असोज, २०७४
एजेन्सी । दसैँ नजिकिँदै छ । बजारमा ड्रेस किन्नेको भिडभाड बढ्दै छ । बजार घुम्दा डमीलाई लगाएका सोपिस सबै राम्रो भएजस्तो देखिन्छ र किन्न मन लाग्छ ।
बजारमा अरू कसैले लगाउँदा सुहाएको लुगामा पनि मन आकर्षित हुन्छ । आफूलाई पनि सुहाउला भनेर किन्ने गरिन्छ । तर, फेसन डिजाइनरहरू भन्छन्– यस्तो लहडमा कहिल्यै ड्रेस किन्नु हुँदैन । बजेट र क्वालिटीबाहेक सुहाउने सन्दर्भमा ड्रेसबारे सबैभन्दा सोच्नुपर्ने कुरा हो– रङ ।
फेसन डिजाइनर नवीना महर्जनले गोरो, कालो र गहुँगोरो वर्णका व्यक्तिले कस्तो रङको ड्रेस रोज्ने र कस्तो नरोज्ने भन्नेबारे टिप्स दिएकी छिन् स्
गोरो वर्ण भएका व्यक्तिले ड्रेस किन्दा रङ नमिल्ला कि भनेर त्यतिसाह्रो डर मान्नु पर्दैन । प्रायः सबै खालका रङ गोरो छाला भएका व्यक्तिलाई सुुहाउँछ । तर, केही रङमा भने सचेत हुनैपर्छ । डार्क कलर सकेसम्म प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
डार्कमा पनि पूरै ब्ल्याकलाई तिरस्कार नै गर्दा हुन्छ । मिडियम डार्कसम्म भने ठीकै हुन्छ । त्यसो त ओभर ब्राइट कलर पनि गोरो छालामा सुहाउँदैन । मतलब यो होइन कि ह्वाइट कलर नै सुहाउँदैन । ह्वाइटमा क्रिम कलर लगाउन सकिन्छ, तर ट्युबलाइट कलर भने नरोज्नु नै ठीक हुन्छ ।
कालो वर्णका व्यक्ति गोरो छाला भएका व्यक्तिको तुलनामा ड्रेसको रङबारे बढी नै सचेत हुनुपर्छ । कालो व्यक्तिले पहेँलो रङको ड्रेस नलगाउने भन्ने हुन्थ्यो, तर अहिले फेसनमा पहेँलो पनि चलेको छ । तर, पहेँलोमा सेलेक्टेड मात्रै सुहाउँछ । लेमन एलो ९कागती रङको० सुहाउँछ भने हाइलाइट एलो सुहाउँदैन ।
हरियो रङ पनि कालो वर्णका व्यक्तिले तिरस्कार नै गरिदिए हुन्छ । सुन्तला रङ भने राम्रो सुहाउँछ । कालो छाला भएकाले कालो नै रङको कपडाचाहिँ रोज्नु नै बेकार हुन्छ ।
यो सुहाउँदैन । डार्क कलर कम नै प्रयोग गर्दा हुन्छ । धेरै ब्राइट (लाइन फाल्ने) पनि रोज्नु राम्रो हुँदैन । रातो र सेतो रङको ड्रेस पनि कालो छालामा राम्रोसँग म्याच गर्छ ।
रातो वर्णका व्यक्ति पनि हुन्छन् । तर, यो वर्णलाई गहुँगोरो क्याटगरीमै राखिन्छ । कालो र गोरो वर्णको बीचको रङलाई गहुँगोरो भनेर चिनिन्छ । गहँुगोरो वर्ण हुनुको फाइदा यो हो कि सबै रङका ड्रेस म्याच हुन सक्छ ।
जुन रङ पनि सुहाउने गर्छ । एउटा मात्रै कुरामा सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो स्किनटोनसँग मिल्ने कलर गहुँगोरो व्यक्तिले प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
शनि ग्रह अस्ताउँदै, कुन–कुन राशिलाई कस्तो असर पर्छ ?
एजेन्सी । कुन्डलीमा शनिको दशाले धेरै नै असर गर्छ । शनिको आँखा पर्यो भने बनिराखेको काम पनि बिग्रन्छ । शनि ग्रह ५ डिसेम्बरबाट ७ जनवरीसम्म अस्त हुँदैछ ।
धुवाँ–धुलोबाट छालालाई बचाउन नियमित गर्नुस् यी ७ काम
काठमाडौँ । राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण उच्च छ । सवारीसाधन, उद्योगधन्दा र सडकबाट निस्किने धुवाँ–धुलोले वायु प्रदूषण बढाएको छ ।
जब यी बलिउड अभिनेत्रीका ड्रेस खुल्यो, सबैका सामु भए लज्जित
मुम्बई – बलिउड अर्थात चमक धमक र भरपुर ग्ल्यामर । ग्ल्यामर भन्ने बित्तिकै बलिउड अभिनेत्री र उनीहले लगाउने फेसन । ती फेसन जसको चक्करमा बलिउड अभिनेत्री कयौं पटक पब्लिकका अगाडी लज्जित भए ।